အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: February 2009
ကဗျာနာမည်က “၃” တဲ့
ကကက ရယ် ဘဆ ရယ် ခမမရယ်
ကိုကြီး နဲ့ ကုန်းလားရေလား ရေသူကြီးရေ လို့ငယ်ငယ်ကဆော့ဘူးတယ်
ကြီးမားလှတဲ့ အသင်လောကရေ နင့်ကိုအမြဲ ငါကုန်နေတာကတော့ “စိတ်” ပဲ
ကျွန်း ရေ နင့် ကို ရေတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေပြီဟာ (ဘေးမှာငါးမန်းတွေ နဲ့)
(အမေရိက ကို အမေကြီးနဲ့ “က” ပြီးရင် သွားမယ်)
ဘုတ်ထိုင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဘွတ်ရွှတ်ဒိုင်းလို့ ငယ်ငယ်ကဆော့ဘူးတယ်
ဆုံရတဲ့ ဘုံဘ၀က ဆရာမ ဘုတ်ဘုတ်ရေ
ခင်ရာဆွေမျိုးတဲ့ ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတယ်
(စ လုံးမှာ စာလုံးတွေရောင်းစားမယ်)
(ခုမဟုတ်ဘူး အကျွေး နဲ့ကျွေးမှာ ဟိဟိ)
အမှတ်တရပေါ့ (“ယ” နဲ့ရေးရင်အရမ်းစိတ်ဆိုးတာပဲ)
(ဘ ကုံးက အန်တီချမ်း)
Posted by တီချမ်း at 10:06 PM3comments: Links to this post
Labels: ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ
ရင်နာနာနဲ့ နင့်ကို ငါခွဲ
ငိုပွဲ ငိုပွဲ ကြေကွဲ
နှောင်တွယ်နေတဲ့ နှလုံးသား ကကွဲ
ကြေကွဲ ကြေကွဲ ငိုပွဲ (အစဉ် အမြဲ)
Tagged (Karen mok)
Posted by တီချမ်း at 11:58 PM2comments: Links to this post
Labels: သီချင်း ခံစားမှုများ
အသက် ၈၀ အရွယ်အမယ်အိုကြီးဟာ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမရော၊သူမရဲ့ ကင်းဘတ်စရောက
အကြောင်းကလဲ သူတို့တွေက ပန်းချီဆရာတွေဆိုတော့
မင်းကိုကိုယ်က ဟောဟိုက တောင်တန်းတွေ၊ နေခြည်တွေ၊
သူတို့တွေအတူတူထိုင်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့အချစ်တွေကို ပန်းချီတွေဆွဲကြတယ်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးတွေရယ် ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်
ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ဆီတွေလို ပျစ်တဲ့ မိုးမည်းမည်းတွေရွာချလာပါရောတဲ့
“ဘုရားသခင်၊ သူ့ကိုကျွန်မဆီကနေ ခေါ်မသွားပါနဲ့အုံး”
ဒါပေမယ့် သူမဟိုကိုမရောက်ခင်မှာပဲ သူသွားနှင့်မှာကိုလဲ
သူမရဲ့ စိတ်ထဲက စိုးရိမ်နေမိပါရဲ့
ဒီပုံတူတွေနဲ့ ရှင့်ကို သတိရနေအောင်
ဒါပေမယ့် ဒီပန်းချီကားတွေကတော့ အစစ်တွေပါ”
သူမ ငိုကြွေးချိန်တွေမှာ သူပွေ့ဖက်နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တာတွေ
Posted by တီချမ်း at 5:02 PM2comments: Links to this post
Eat this (middle finger)
Posted by တီချမ်း at 2:59 PM2comments: Links to this post
Labels: ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများ
ကိုယ့်ဖဲကို အသက်ပြည့်ယုံ လျှိတတ်တာ
ဆိုင်ရှင်က အတွက်မှား လို့
မှားပြီးငွေပို အမ်းမိ ရင်ပြန်မပေးတတ်တာ
၉တန်း ၁၀တန်း တုံးက
ကော်ပီ ပေစ့် လုပ်လို့ရရဲ့သားနဲ့
၃ ခါတိတိ ရိုက်လိုက်တယ်
Posted by တီချမ်း at 2:51 PM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 5:21 PM No comments: Links to this post
ဗမိုး ၊ ငတက်ပြား
Posted by တီချမ်း at 4:05 PM2comments: Links to this post
ပေးထားသေးတယ်လေ Elsa တဲ့)
တူတူထိုင်နေကြ Moon Bakery ဆိုတဲ့
ထိုင်စားကြတဲ့ Silom Village က
Posted by တီချမ်း at 5:25 AM 1 comment: Links to this post
ဆိုတာ ဂျိုပါမပါတောင်မေ့နေခဲ့တာကြာပြီပဲလေ။ ။
Posted by တီချမ်း at 7:26 AM No comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 4:50 AM No comments: Links to this post
နာမည်က "the Ritz" တဲ့
Mc burger စားဖူးအောင်
ပြောင်းရွေ့လို့ပြေး (စတာနော် ပျော်စေချင်လို့)
up date လုပ်ပေး
Posted by တီချမ်း at 3:54 AM 1 comment: Links to this post
Lame excuses Part II
How important it is to keep two people close
What is the meaning of friendship?
Is long distance works in friendship?
Better just to be friends
Was it the only way of communication?
Yes, it was when I was back in Myanmar.
Emails were the only way of communication.
I am here in Bangkok now
Where phone is available
Was it too hard to push some numbers?
Or was it too much to ask
This is just for the sake of the poem
We will always be friends
I know you won’t know it?
Again the influences of American movies
I know now you are smiling after you reading this poem
May be say sorry
As I cannot hear
And I am really value this friendship
Even we are not two lovers
A Chen, 21st Feb 2009, Bkk
Posted by တီချမ်း at 12:50 AM No comments: Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ က အေဒရီယံ အိမ်ပြန်လာတယ်
လတွေ၊ နှစ်တွေ ပျံသန်းသွားတာ သူမစောင့်ကြည့်ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်
သူမက အခုဆိုလှတပတ အပျိုမလေးတောင်ဖြစ်နေပြီ
အရာရာတိုင်းကတော့ အရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလေ။ ။
Posted by တီချမ်း at 10:47 PM No comments: Links to this post
မဟာရံ တံတိုင်းကြီး တစ်ခုစာ
Posted by တီချမ်း at 10:35 PM No comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 7:33 PM3comments: Links to this post
နင်အိမ်ထောင်ကျသွားပြီကြားတယ် တကယ်လား? မယုံနိုင်စရာပဲနော်
ငါကဒီတစ်သက်နင် လင်မယူတော့ဘူးမှတ်နေတာ အေးလေ
“ကီး” ချိန်တန် “ကီး” ၊ “ပွင့်” ချိန်တန် “ပွင့်” ပေါ့ဟာ။ ကောင်းပါတယ်။
နင်ကဘာလိုလိုနဲ့ ဘလောက်တစ်ခုရဲ့အထင်ကရ မမကြီးဖြစ်နေပြီနော်။
နင်စာတွေတော်တော်ရေးဖြစ်လာတာပဲ။ တခါတလေ ငါစဉ်းစားမိတယ်။
ငါတို့တွေ မြန်မာပြည်ထဲ မှာသာရှိနေသေးရင် အခုလို
နိုင်ငံခြားရောက်မှာ စာပိုရေးဖြစ်တာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အထီးပိုကျန်လာလို့လား။
ပိုပြီး ဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာလို့လား လို့လေ။ ရောက်တတ်ရာရာပေါ့ဟာ။
ဘာလိုလိုနဲ့ ငါတို့တတွေ ခင်မင်လာကြတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထဲဝင်လာပြီနော်။
ပြန်တွေးမိရင်လွမ်းတယ်ဟာ။ အေမီ တို့ရော၊ ပုပု တို့ ဟဟ တို့ရော၊ မမကြီးရော။
အဲဒီတုံးကပျော်တော့ပျော်စရာကြီးနော်။ စိတ်လဲရှုပ်ရ။ ပြဿနာတွေလဲရှင်းရနဲ့လေ။
ဘယ်သွားသွားအယောက်နှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်နော်။ အင်း လွမ်းစရာလေးတွေ။
အခုတော့လဲ အိမ်ထောင်တွေကျ (နင်ကအစ)၊ ကလေးတွေမွေး။
ဟူး…ဘ၀တွေပြောင်းသွားလိုက်ကြတာနော်။ နင့်ရဲ့အတက်အကျတွေနဲ့မတူပေမယ့် ငါ့ရဲ့အတက်အကျတွေကလဲ တော်တော်ကြမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါဘာတွေဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ အနားမှာအမြဲရှိခဲ့တဲ့နင့်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ် သိလား။
ငါ့ကို M3 အထိ အမိုးကြော်ပေးတဲ့ ပုတ်သင်ညိုတွေလိုက်ပေးတာမှတ်မိသေးတယ်။
နောက်နင့် အိပ်မက်ထဲက ပန်းဆိုးတန်းဘောတံတားကြီးမှာ ငါ့ကိုနင်ဖက်ပြီးငိုတာလေ။
မျက်ရည်တွေကတော့ အကယ်ဒမီ ရှော့နော်။ မျက်နှာကသာ စပ်ဖြီးဖြီးဖြစ်နေတာ။
၂ လပိုင်း၊ ၄ ရက်နေ့။
Posted by တီချမ်း at 4:44 PM2comments: Links to this post
ကျွန်မ မှာအဖေ့ရဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့ အမေ့ရဲ့ လက်တွေလဲရှိသေးတယ်
ကျွန်မ မှာ မညီမညာနဲ့ထပ်နေတဲ့ သွားတွေရယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ဆံပင်တွေ ရွှေရောင်သန်းနေတုံးပဲ
အင်း…..ပြီးတော့ ကျွန်မ ၀ိုင်အရက်ရဲ့အရောင်ကိုလဲ
ကျွန်မ မှာသွေးတွေတိုးထွက်စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးကြောတွေလဲရှိတယ်
စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ ကျွန်မ ရယ်တတ်တယ်
သူများတွေရဲ့နာကျင်မှုတွေကို ကျွန်မ စာနာခံစားရပါတယ်
ကျွန်မ လင်းပွင့်လွတ်လပ်တဲ့ မီးတောက်ကိုကြိုက်တယ်
ကျွန်မ ဟိုးငယ်ငယ်ကလေးဘ၀ကတည်းက တကိုယ်ကောင်းဆန်တာပါ
ကျွန်မ အလက်စကား ကလာပေမယ့် အအေးကိုမုန်းတယ်
ဒါပေမယ့်… ကျွန်မ ရဲ့သွေးတွေစီးဆင်းနေဆဲပဲ
ပြီးတော့ ရင်သားတွေကတော့ အမြဲဘယ်တင်းမာနေပါတော့မလဲနော်
ကျွန်မ မှာသန်မာတဲ့ ပခုံးတွေရှိတယ်
အဖွားဆီကအမွေရထားတဲ့ ဆွစ် လူမျိုးတွေရဲ့မျက်နှာလဲရှိတယ်
ပြီးတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ခြေသန်းလေးလဲရှိသေးတယ်
ကျွန်မ ဒန်ဒေလီယံ လို့ခေါ်တဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်းလေးတွေလုပ်လေ့ရှိတယ်
ကျွန်မ ဆံပင်တွေကို မအိပ်ခင်ဖီးသင်လေ့ရှိတယ်
ကျွန်မ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ ပြင်သစ်လေသံတုပြီးပြောတတ်သေးတယ်
ကျွန်မ မှာ ရွှေရောင်အသားအရည်ကတော့ရှိတုံးပဲ
ကျွန်မ ရဲ့ လက်သည်းတွေကလဲ ပုံမှန်ကျိုးနေတုံးပဲ
ပြီးတော့ ပခုံးတွေကတော့ အမြဲသန်မာချင်မှ သန်မာတော့မှာ
ဂျူဝယ်လ် ရဲ့ကဗျာ ကို ဘာသာပြန်ပါတယ်
ဒီကဗျာလေးကို သူမရဲ့ပထမဆုံး အယ်လ်ဘမ်
“ရှင့် ရဲ့ အပိုင်းအစများ” မှာ လဲထည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ။
Posted by တီချမ်း at 11:30 AM2comments: Links to this post
Labels: jewel's ကဗျာများ
အခု ကိုဇော်ဇော် နဲ့ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာလေးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်
ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ အနုပညာ ဆိုင်ရာတွေပဲများတာ
HIV/AIDS နဲ့ ဆိုင်တာဘာမှမရှိသလောက်ပဲ
အလုပ်ချိန်ပြင်ပ မှာတော့ ကျွန်တော့် ကို ကျွန်တော် အပြည့် အ၀ ပိုင်ချင်တယ်လေ
လုပ်သင့်တာတွေချည်းပဲလုပ်နေရတဲ့ဘ၀ ကိုတခါတခါ တော်တော်မုန်းနေပြီ
ဪ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်စာတွေထဲက မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့သင့်တော်မယ်ထင်တာတွေလဲပို့ပေးပါလား
တွေ့နေကြ အတ္တကျော် ကို့ ကောင်းသန့် တို့လိုတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့
လောကကြီးကို ကလေးလေးတွေ ရဲ့အမြင်ကနေကြည့်ပြီးတော့လေ
ပြီးတော့ အထူးအဆန်းလေးလဲဖြစ်စေချင်တယ် အတွေးဆန်းရမယ်ပေါ့ဗျာ
စာက ၉ စောင်ရှိမယ် ထင်တယ် တချို့ နာမည်တပ်ထားတဲ့လူတွေကအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်
ဖွားဖွား၊ မေမေ၊ ၀က်ကလေး တို့ကတော့ ကျွန်တော်တွေးထားတာပေါ့
နောက်ကဗျာတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ ပြီးတော့ဝေဖန်ပေါ့………………
စာလဲရေးလေ ကိုဇော်ဇော် ကတဆင့် ဒါမှမဟုတ် မခိုင်မြန်မာလိုကိုစာရွက်နဲ့ပဲရေးပြီး
Alliance က ကိုကောင်းထက် ကိုကျွန်တော့်ဆီ ကိုပို့ပေးဖို့ပြောလိုက် သူလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လေ
အောင်မျိုး ၊ ၁ လပိုင်း ၊ ၁၅ ရက်နေ့။ ။
Posted by တီချမ်း at 6:21 PM 1 comment: Links to this post
Monumento a’ colon
Is that the wall on my left???
Nice feature, cute people
I am walking on the street smoking cigarette
Is that someone following me?
Thereaman in the street
Is that the wall on my right???
Weather remind me of Shanghai…Hanoi
Cool, cold, shiver
Suddenly, it rain
Is thereawall in front of me???
High altitude makes me difficult to breathe
Hotel doesn’t need air condition
Taxi and buses either
Is thatawall behind me???
20 million of population four times of my city
I like the wide platforms with different sculpture
and benches everywhere
Posted by တီချမ်း at 6:07 PM 1 comment: Links to this post
Labels: cities thoughts
ရှေရီ (one night stand)
Posted by တီချမ်း at 6:05 PM 1 comment: Links to this post
ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အတိတ် ပုံရိပ်တွေ မျက်စိရှေ့ကဖြတ်ပြေးသွားကြတယ်…..
မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ရှေ့ရေးတွေကို လှမ်းကြည့်မိတယ်…..
ဘ၀မှာ လပြည့်ညတွေ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ဖူးတယ်…..
မင်းကိုသတိရ တမ်းတ တဲ့ညတွေများများလာတယ်…..
တမ်းတမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဟာ….ဪ….အခုတော့……
Posted by တီချမ်း at 6:04 PM No comments: Links to this post
မနက် ၁၀း၃၀။ ။ တူ…တူ…တူ…
မနက် ၁၁း၀၀။ ။ လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သည်
မနက် ၁၁း၃၀။ ။ မအားသေးပါရှင်
မနက် ၁၂း၀၀။ ။ ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုပါရှင်
ညနေ ၁၀း၃၀။ ။ တူ…တူ…တူ…
ညနေ ၁၀း၄၅။ ။ Sorry the number you’ve dialed is not in the service
area, please wait and re-dial later!
ညနေ ၁၀း၅၅။ ။ Sorry, the number you’ve dialed is power off.
ညနေ ၁၁း၀၀။ ။ +95-951-0042…
‘‘ဟယ်လို မောင်ဇော် နဲ့ပြောချင်လို့ပါ’’
‘‘ မီကိုဆိုင်က ဖိုးဇော်လေ’’
‘‘ဪ အစ်ကိုရေ အခု ……….ကိုရောက်နေတယ်’’
‘‘ ဪ ဆော်ရီးနော်…’’
Posted by တီချမ်း at 6:03 PM2comments: Links to this post
တစ်ယောက်ယောက် ကို ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ အဖြစ်
(ရှိခဲ့တဲ့ ရှိကောင်းရှိ ခဲ့နိုင်တဲ့နေရာ)
I wantaman that I can intellectually impress!
Posted by တီချမ်း at 6:01 PM No comments: Links to this post
There arealot of things I do for life
Some are about winning
Some are about jealousy
Some are about charity
Some are about hatreds
Some are about selfishness
Some are about ego
Some are about greed
Some are about money
Some are about sex
But what I am doing now is only this and it is for u
Is about love and about happiness for “us”
Posted by တီချမ်း at 6:00 PM No comments: Links to this post
The sea slowly gets away, the tides slowly getting closer
Yesterdays slowly gets away, tomorrow slowly getting closer
Spring slowly gets away, autumn slowly getting closer
Childhood slowly gets away, headaches slowly getting closer
Honesty slowly gets away, lies, pretence and cheating slowly getting closer
Holidays slowly gets away, boringness slowly getting closer
When I starting to realize all these
My god I was shock
Let us run away from everything
Posted by တီချမ်း at 5:58 PM2comments: Links to this post
ပုံလေးကိုနန်းညီ ဆီကတစ်ဆင့် ဒီကနေရပါတယ်
You won’t get sin
You are not Adam
We are not in the Eden garden
Where did “the Satan” in the form of snake go?
You won’t get poison
I am not an old witch inaform of Queen
You are not Snow White
Where did all the seven dwarfs go?
When will he come rescue me?
I am justasimple apple
Lonely because no one willing to “bite me”
In Korea, an apple mean…
“The symbol of peace”
People will give an apple as peace offer
There won’t be any fight between us
And we did not get in fight before
You are not left-side and
I am not right
So bite me once
We won’t find the gravity
You are not “Newton”
I am not "an apple tree"
There won’t be any “action to reaction” between us
There is no third law
I am justasimple lonely apple
22nd Oct 2008
Mexico city, fiesta americana
Posted by တီချမ်း at 5:49 PM 1 comment: Links to this post
In my life……..
I have had done lots and lots of mistakes
Some are even GOOD mistakes
You know! Like Pleased, Contented
Ok let me ask you?
Ifamistake is making you satisfied
As well as happiness
Then can you still call it “mistake”?
The main “factor” that make you did that mistake was “love”
Posted by တီချမ်း at 5:48 PM No comments: Links to this post
Freezing, shivering cold weather
One heart lost and found
2nd of June 1984
NNZ (my 27th Birthday’s present sent by GOD)
A nice one comes withanice package
Lovely, cute, warmth and careful, kind hearted
Mistakes, apologies, sorrows
Compromises, forgiveness, promise for December
Sex, beer and cigarette
One lust, heated and burned
Back and ford, back and ford
Flowers, birthday, friends and affaires, sexes
Tea, baggers donation
Fine weathers, wine and whining
Cruising in the mist
Mdy to ygn
Darken two ways road
Breaking Misty ways lights
Shops that open till dawn
Follow with poems
Knowing the impossible is killing me softly
Posted by တီချမ်း at 5:27 PM No comments: Links to this post
Back in Bangkok again
I don’t remember how many times this is
I am back in Bangkok again
The atmosphere is different
May be because of my recent recovery from flu
May be coz of the humid weather
May be is “the heat” bothering me
Or may be is u (not having u beside me)
Missing u makes me felt everything different….
Inabad and miserable ways
But for one sure thing is that I am not happy
How can I be happy when u r notaround?
Hate the situation and the fact that
You always have to travel when I amaround
And I always have to travel when u r back
Is this the way that we are supposed to be?
Or just the god is fooling us
Posted by တီချမ်း at 5:23 PM No comments: Links to this post
How long have we met
Does not matter to me
Well at least it doesn’t matter to my feelings for u
You know the way I feels for you is so strong that
I even can’t believe
It is the first time that I felt something this strong for
Someone …. I just met
May be the times we meet is not long enough to say
How much I uh…? you yet
But I will take this asachallenge of love for me
So that I can see how long I can commit to someone
And have feelings for
But I really do like ualot
And like the feeling of liking u
I like ualot
A lot more than I think I can even like someone this much
May be I might have had some fantasies in the past
The feelings are different
Once my friend (bestest friend) told me
I always say something like this whenever I meet someone new
And it doesn’t take longs to see what happened next?
I don’t know how can I response to her
Coz it has been true (mostly 95%)
But this time I feel so real
Well I said that too, every time she said those
May be I like you
May be I like you more than others I had liked before
Let’s see how is love going to challenge me
May I be wrong!
May I be right!
May be you are the right one
Or may be you are not…
Posted by တီချမ်း at 5:22 PM No comments: Links to this post
MK call first
Then I have five missed calls
Among them the most touching one is from EL
I called back and he said “happy birthday”
Min Min called and wished
Then come SG
And finally AMY at 11 45 pm
And then I call MZ
He is still the cutest kid
And I am withabunch of drag queens
Whatawonderful Birthday
I went to the botanic garden in Maymyoe
Took some nice fotos
M Z -4= =4=3-
Feb 21 gonna be 22 years 2009
Posted by တီချမ်း at 5:17 PM No comments: Links to this post
New Year eve of 2008
Today is the last day of 2007
I remembered how many time is this and so do you
We talk aboutalot of things
We talk about religions
We talk about life
We talk about Gods
We talk about beliefs
We talk about languages
We talk about works
We talk about your native
We talk about petroleum
“Even I know we are not going to be together”
It’s doesn’t mean like that it isn’t possible
Or this will not just going to happen in one day or even inawhile
But I don’t care for past I don’t care for future
All I care for is now I am seeing u and I am happy with it
I don’t want to be with u
I don’t want to have either sexually or emotionally relations with u
All I am asking for is just the bond between us
That you will know whenever u need me u can always count on me
And I want u to know whenever you need me
I will always be there for u
When u down
When u lonely
When u feels small
When u feel like u need someone
I just want u to know that I will be there……………. Always
Or may be I just lied to u…………
30th Dec 2008
Posted by တီချမ်း at 5:16 PM No comments: Links to this post
15 year old lady (Dear dad)
A father passing by his teenage daughter's bedroom was astonished to see the bed was nicely made and everything was neat and tidy. Then he saw an envelope propped up prominently on the centre of the pillow. It was addressed "Dad". With the worst premonition, he opened the envelope and read the letter with trembling hands.
It is with great regret and sorrow that I'm writing you, but I'm leaving home. I had to elope with my new boyfriend Randy because I wanted to avoidascene with Mom and you. I've been finding real passion with Randy and he is so nice to me. I know when you meet him you'll like him too - even with all his piercing, tattoos, and motorcycle clothes.
But it's not only the passion Dad, I'm pregnant and Randy said that he wants me to have the kid and that we can be very happy together. Even though Randy is much older than me (anyway, 42 isn't so old these days is it?), and has no money, really these things shouldn't stand in the way of our relationship, don't you agree?
Randy hasagreat CD collection; he already ownsatrailer in the woods and hasastack of firewood for the whole winter. It's true he has other girlfriends as well but I know he'll be faithful to me in his own way.
He wants to have many more children with me and that's now one of my dreams too.
Randy taught me that marijuana doesn't really hurt anyone and he'll be growing it for us and we'll trade it with our friends for all the cocaine and ecstasy we want. In the meantime, we'll pray god; that science will findacure for AIDS so Randy can get better; he sure deserves it!!
At the bottom of the page were the letters "PTO".
Hands still trembling, her father turned the sheet, and read:
Dad, none of the above is true. I'm over at the neighbor’s house. I just wanted to remind you that there are worse things in life than my report card that's in my desk centre drawer.
Please sign it and call when it is safe for me to come home. I love you!!
Got it from one of my close friends, don't know where she got it from. But wherever she got this, the credit goes to the original poster.
Posted by တီချမ်း at 1:31 PM No comments: Links to this post
နင်ကလူကောင်းလေး ပါ။ ငါကလဲ လူကောင်းမလေး ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကိစ္စက ဘာလို့ ဒီလောက်အထိဖြစ်ကုန်ရတာလဲ?
ငါတို့ လမ်းခွဲရတော့မယ် ဟုတ်လား?
အရင် တုံးက တို့နှစ်ယောက်က အရမ်း အရမ်း၊ အရမ်း အရမ်း
အင်း တကယ်လို့ လမ်းခွဲကြတော့မယ်၊ မချစ်ကြတော့ဘူးဆိုရင်လဲ
ဘာလို့ အဲဒီ လမ်းခွဲမယ့်နေ့က ဓါတ်လှေကားထဲမှာ
ငါ့ကိုယ်ငါ မရပ်မနားတမ်း မေးမိတယ်သိလား
ဘာမှ မတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလား လို့လေ
အရင်တုံးကလဲ တို့တွေ ရန်ဖြစ်ဖူးကြပါတယ်၊ စိတ်တွေလဲကောက်ဖူးကြတာပဲ၊
ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ တစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက်
တို့တွေဟာ တစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့
ဘာဖြစ်လို့ ရုတ်တရက် အမှိုက်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ?
ကဲပြတ်ကြတော့ မယ်ဆိုပြန်တော့ရော ဘာလို့ ရပ်လို့မရအောင်ငိုနေကြတာလဲ
ငါတို့နှစ်ယောက် ဓါတ်လှေကားထဲမှာ တင်းတင်းကြီးဖက်ပြီးတော့ ငိုနေလိုက်ကြတာ
ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကို အရင်‘ထား’ မသွားချင်ဘူးလေ
လမ်းခွဲ မယ့် ဓါတ်လှေကားလေးက ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် ၊
တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ၊ သွားလိုက်ရပ်လိုက် နဲ့
အရူးနှစ်ယောက်လို တင်းတင်းကြီးဖက်ပြီးငိုနေတဲ့ တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့
၁ လပိုင်း၊ ၁၅ ရက်နေ့။ ။
Posted by တီချမ်း at 1:28 AM 1 comment: Links to this post
ကမ်းခြေကို ရေကူးဖို့ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်သွားမယ်လို့ ကတိပေးထားခဲ့ဖူးတာလေ
အခု ဆောင်းဦးရာသီတောင်ရောက်နေပြီ ကျွန်တော်မျှော်နေမိတုံးပဲ
ဖေဖေ က ‘‘ဘယ်သူတွေကရောတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်လို့လဲသားရယ်’’လို့
ရယ်ပြုံးပြုံး(နာကျင်ပြုံး) မျက်နှာနဲ့ ပြောလေ့ရှိတာလေ
သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့တော့ အထီးကျန်နေကြတာပါပဲ ပုံစံသာမတူကြတာလေ
တကယ်တော့ နွေဦးရာသီတုံးက ကမ်းခြေကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးပြီးသားပါ
အဲဒီတုံးက ကျွန်တော်တွေးမိတာက ဖေဖေကိုစောင့်အုံးမယ်လို့လေ
ဖေဖေ့ကို ကျွန်တော်သစ္စာမဖောက်ချင်ပါဘူး၊ အတူသွားဖို့ စောင့်မှဖြစ်မယ်လေ
ဆောင်းဦးရာသီရဲ့ ကမ်းခြေက လေပြင်းတွေစတိုက်နေလောက်ပြီ သိလား
နောက်နှစ်နွေဦးကြရင်တော့ ဖေဖေ့ကို ကျွန်တော်ကမ်းခြေခေါ်သွားမယ်လေ
ကျွန်တော်ကားစီးတတ်ပါတယ် ဘယ်ကားစီးပြီး၊ ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာ
ပြီးတော့ ကမ်းခြေကိုလဲ ကျွန်တော် တော်တော်ကျွမ်းနေပါပြီ
၁၁ လပိုင်း၊ ၁၀ ရက်နေ့။
Posted by တီချမ်း at 1:24 AM No comments: Links to this post
မှတ်မိသေးလား ကျွန်တော် သုံးနှစ်သားတုံးကလေ။ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ဟာသလေးကိုမေမေ မှတ်မိသေးလား? အဲဒီတုံးက မေမေ့ကို ‘‘မိခင်’’ ဆိုတာဘာလဲ လို့ ကျွန်တော် မေးခဲ့တော့
‘‘မိခင်’’ ဆိုတာ မေမေ လို့ နောက်တစ်မျိုးခေါ်တာ လို့ မေမေ ကပြန်ဖြေတယ်လေ။
အဲဒီတော့ အနားမှာရှိနေတဲ့ ဖေဖေ က မေးတယ်။ ။
‘‘ ဖေဖေ့ ကိုရော နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လို့ရသလဲ?’’ ဆိုတော့
ခဏ စဉ်းစားပြီး ကျွန်တော် က ‘‘ဖိခင်’’ လို့ပြန်ဖြေတော့
ဖေဖေ နဲ့ မေမေ ဆိုတာ ရယ်လိုက်ကြတာ။ တော်တော်နဲ့မရပ် ဘူးလေ။
တွေ့တဲ့လူတိုင်း ကို ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးဆန်တဲ့ ဟာသလေးကိုပြောပြောပြရတာအမောလေ။
ဒီနေ့မေမေ့ ကိုလွမ်းလိုက်တာ။ ဟိုး ငယ်ငယ် ကလေးဘ၀တုံးကလို
လက်ကလေးနှစ်ဘက် ကိုတောင်ပံတွေလိုဖြန့်ပြီးတော့ မေမေ့ရင်ခွင်ထဲ ကို
ပြီးတော့ မေမေ့ကိုလွတ်ထွက် မသွားအောင် တင်းတင်းလေးဖက်ထားမယ်လေ။
မေမေရေ ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက် မှာ နေမင်းကြီးက သာလိုက်တာ
လေပြေတွေ ကလဲဖြေးဖြေးလေး ပြေးဆော့လို့
ကျွန်တော် နွေးနွေးလေးနဲ့ ပျော်နေတယ် ချိုမြိန်တဲ့ အချိန်လေးတွေပါပဲ
မေမေ ဘယ်ကိုရောက်နေနေ……..နွေဦး လိုထာဝရ
ချိုမြိန် ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ။
၁ လပိုင်း၊ ၁၄ ရက်နေ့။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ‘‘ဖိခင်’’ ကြီးလဲ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး ရောက်ရာအရပ်မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။
Posted by တီချမ်း at 1:04 AM No comments: Links to this post
ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း မြင့်မြတ်ရေ…..
ငါကလူတွေပြောပြောနေတဲ့ လောကကြီး ရဲ့အလှအပတွေ ကိုမယုံဘူးဟ
ချစ်ခြင်း ရဲ့အလှအပ၊ လူ့ဘ၀ ရဲ့အလှအပ၊ စိတ် ရဲ့အလှအပ၊
အရွယ်ရောက်ခြင်း ရဲ့အလှအပ၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်း ရဲ့အလှအပ၊
စသဖြင့်၊ စသဖြင့် ပေါ့ဟာ
တခါတခါ ငါ့ ကိုယ်ငါ စဉ်းစားမိတယ် ငါဟာ စေတန် ရဲ့ ကိုယ်ပွားများလားလို့ပေါ့ဟာ
လောကကြီးရဲ့အရာရာဟာ ငါ့ အတွက်တော့ သံသယနဲ့ ကြည့်စရာတွေ ချည်းပဲဟ
ရှိရှိသမျှ အလှအပတွေ ကိုလဲ ငါကမယုံကြည်တော့လေ
(တကယ်တော့ အဲဒါကိုလဲ ငါသိပ်တော့မယုံဘူးဟ ဟားဟားဟား)
ငါ့ကို ကုစရာဆေးမရှိတော့တဲ့အဆိုးမြင်ဝါဒီတစ်ယောက်လို့ပဲ ထားလိုက်ပါတော့
ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ဒီလောက်စိတ်ကောင်းရှိပြီးဖြူစင် တဲ့နင့်ဆီမှာ
ငါ့လိုစိတ်ပုတ် ပြီး အရာရာအဆိုးမြင်တတ်တဲ့
ဒါမှမဟုတ် ငါ့ရဲ့ဆိုးညစ်မှုတွေဟာ နင့်ရဲ့ ကောင်းမြတ်မှုတွေ ကိုကလန်ကဆန်လုပ်ဖို့
ဒါပေမယ့် ငါသိပါတယ် နင်က ငါ့ရဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့အခြမ်းကို
ဒါပေမယ့် နင် နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ရတာကိုတော့ ကျေနပ်ပါတယ်
ထူးပါ့…. ဆန်းပါ့… ထူးဆန်းပါ့…………..လောကကြီးရယ်
၁ လပိုင်း ၊ ရ ရက်နေ့။
Posted by တီချမ်း at 1:00 AM 1 comment: Links to this post
ဟေ့ အောင်မျိုးကြီး . . .
နင့်ရဲ့ ကောင်းကင်ဘုံခရီးက စိတ်လှုပ်ရှားစရာကြီး။
ဟုတ်တယ်ဟငါက ကောင်းကင်ဘုံတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို လုံးဝမယုံဘူး။
ငါ့အတွက် ကောင်းကင်ဘုံက ငါ့စိတ်ကူးတွေပဲလေ . . .
တခါတလေ . . .
ကားစီးနေရင်းနဲ့ ငါကိုယ်ငါ ကားဘေးမှာ ပျံဝဲပြီး လိုက်နေတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲက ဗီလိန်လူညစ်က ငါဖြစ်နေတယ်။
လမ်းဘေးအမှိုက်ပုံကို ခွေးဝဲထူ တစ်ကောင်နဲ့ အပြိုင် အဆိုင် ရှာဖွေစစ်ဆေးသိမ်းဆည်းကြတယ်။
ငါ့ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူလေး ဘေးမှာ ထိုင်ပြီး ကဗျာတွေ တလှိမ့်ချင်း ရွတ်ပြနေလိုက်တယ်။
စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကို စာလုံးပေါင်းပြီး ကဗျာယောင်ဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်။
နင်ကလည်း နင့်ဘုံကြီးမှာ ပျော်နေတုန်း
ငါကလည်း ငါ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ လုံးလားထွေးလား . . .
အင်း . . . နင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်လမ်းကို သိချင်တယ်
(နင်ပြောတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံကြီးဆီကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့)
9 ဇန်န၀ါရီ 2009
Posted by တီချမ်း at 12:50 AM 1 comment: Links to this post
ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ဘုတ်ဆုံရေ…..
နင်ပြောဖူးတယ်မဟုတ်လား ဟိုးမိုးပေါ်မှာ ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာမရှိပါဘူး ၊
ကောင်းကင်ပေါ်မှာ လူတွေလွှတ်တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တုတွေ၊
အာကာသလူစွမ်းကောင်းတွေနဲ့ ပန်းကန်ပြားပျံတွေပဲရှိတယ် ဆိုတာလေ
ဒါပေမယ့် နေ့လယ်တရေးအိပ်တုံးက ငါ တကယ်သွားခဲ့ပြီဟ
ငါ ငါ့ရဲ့အာကာသမှာ စီးလို့ရတဲ့ယာဉ်နဲ့ တိမ်တွေပေါ်မှာ
လေဟုန်စီးရင်း ငါ့ဘေးနားမှာ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ ပျံသန်းရင်းလေ
နတ်သမီးသေးသေးလေးတွေက ငါနဲ့အတူ တိမ်တွေထဲမှာ တိမ်ကူးလို့၊
အပြေးပြိုင်လို့၊ တူတူပုန်းလို့၊ အံမယ် ငါတို့ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်တောင်ဆော့ကြသေးတယ်ဟ
မိုးကြီးတော်တော်ချုပ်မှ ငါလဲမပြန်ချင့်ပြန်ချင်နဲ့ ပြန်လာရတယ်
စိတ်မကောင်းစရာတခုက နင့်ကိုငါ ကောင်းကင်မြို့တော်ဆီသွားတဲ့
နတ်သမီးလေးတွေကပြောတယ် ကလေးတိုင်းမှာ ကောင်းကင်မြို့တော်ဆီသွားတဲ့
လျှို့ဝှက်လမ်း ဒါမှမဟုတ် နည်းတစ်ခုစီရှိတယ်တဲ့ဟ
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကိုပြောပြလို့မရဘူးလေ
Posted by တီချမ်း at 12:49 AM No comments: Links to this post
ချစ်ရတဲ့ ဖိုးထူး ရေ…..
ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ဖိုးထူး ရေ…..
အခုဒီမှာ နေရောင်ခြည်တွေ ဖျဖျလင်းလို့၊
အုန်းပင်ရိပ်တွေကလဲ ငါ့ရှေ့မှာ ကနေကြလေရဲ့
ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးမှာ တိမ်တွေနဲ့လေပြေတွေ အပြေးပြိုင်လို့
လေထုကလဲ သစ်သီးနံ့တွေ ထုံးမွှန်းလို့၊
နီးလာလိုက် ဝေးသွားလိုက်နဲ့ ……နီးလိုက်…………ဝေးလိုက်……
မင်းကတော့ အခုဆို အချိန်ပိုဆင်းနေရတုံးလား၊ မင်းတို့ဆီမှာ အခုအချိန်နေထွက်ပြီလား
‘‘ရှောင်ဟောင်း’’ တစ်ယောက်ဆေးရုံတက်ရပြန်ပြီဆို၊ မလွယ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ကွာ
ထထခုံ ကပြန်ရောက်နေပြီကြားတယ်၊ မင်းရဲ့….လေးနဲ့ရောတွေ့သေးလား၊
ဝေလွင်မမ က သွားကျောင်းတက်နေတယ်ကြားတယ်၊
အောင်ကို တစ်ယောက်လဲ သင်္ဘောလိုက်သွားပြီဆို၊
မဇာကြီးနဲ့တော့ ခဏခဏတွေ့တယ် လေဆိပ်မှာ၊
(ဟားဟား ငါသိပါတယ် မင်းဒီစာကိုဖတ်ရင်းနဲ့ ငါ့ကိုခေါ်နေကြအတိုင်း
အ၀င်းကတော့ အချစ်ထဲမှာ အခုထိမြုပ်နေတုံးပဲ၊ ဒီလိုပါပဲကွာ အသည်းဆိုကွဲလိုက်
တခါတခါ ငါတွေးမိတယ် ငါတို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်အကြောင်းကိုလေ
လူတိုင်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ရုန်းကန်နေကြရတာပဲနော်
လူ့ဘ၀ ကအမြဲဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတာပဲဟာ ဘာလို့ငါတို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြတာလဲ
တိမ်တွေ တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ် ငါ့မျက်စိရှေ့ကဖြတ်ပြေးသွားကြတယ်
တခါတခါ စုစုသွားလိုက် တခါတခါ ပြန့်ကျဲသွားလိုက်နဲ့၊ မင်းသိပါတယ် လူတွေကိုအားပေးရတာငါဘယ်လောက်မုန်းတယ်ဆိုတာကို၊ ကဲကဲ အားတင်းထား သူငယ်ချင်းရေ
မင်းရဲ့ အချိန်ပို (overtime) မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
၁ လပိုင်း ၊ ၈ ရက်နေ့။
Posted by တီချမ်း at 12:47 AM No comments: Links to this post
ချစ်ရတဲ့ မကြီး ထူးထူးရေ…
ဒီနှစ်ရဲ့ ချယ်ရီ ပန်းတွေ ကြွေ ကုန်ပြီ မဟုတ်လား?
ခုမှတော့ ငါဘယ်လိုယာဉ်ပဲစီးပြီး ဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြေးလာပစေအုံးတော့
မြေပေါ်မှာကြွေကျနေတဲ့ ပန်းပွင့်လွှာတွေတောင်မှ လေတိုက်လို့လွင့်ကုန်ရောပေါ့
တကယ့်ကို ၀မ်းပန်းတနည်း ခံစားရပါတယ်ဟာ
နွေဦးဟာ ခဏတထောက်နားတဲ့ ငှက်ငယ်လိုပဲ ရုတ်တရက် ပျံထွက်သွားလိုက်တာ
ဒါပေမယ့် နင်ကတော့ နင့်ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့…..ငါ့ကို
‘‘နောက်နှစ်ကျရင်လဲ ချယ်ရီတွေက ပွင့်အုံးမှာပါဟာ’’ လို့နှစ်သိမ့်အုံးမှာ မဟုတ်လား?
ဒါပေမယ့် ငါ့ရဲ့လက်ရှိခံစားချက်က ဒီနှစ်ရဲ့ ချယ်ရီတွေ ကိုပဲတွေ့ချင်တာလေဟာ
ဒီနှစ်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ နောက်နှစ်ရဲ့ခံစားချက် ဘယ်တူပါ့မလဲဟ
နောက်ပြီး ဒီနှစ်ရဲ့ ချယ်ရီနဲ့ နောက်နှစ်ရဲ့ချယ်ရီကလဲ တူမှာမဟုတ်ဘူးလေ
ဘယ်လောက်လှ ပြီး ဘယ်လောက်မွှေးတဲ့ အကြောင်းပေါ့။
နင့် ကို သတိရတာ ချယ်ရီတွေပွင့် တာကို သတိရတဲ့ အတိုင်းပဲ
အစစ အရာရာ ကောင်းမွန် အဆင်ပြေ ပါစေဟာ
Posted by တီချမ်း at 12:43 AM No comments: Links to this post
ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာ မီးမီး လွယ်အိတ်ကို မြောင်းထဲ ပစ်ထဲ့လိုက်တယ်
၉ နာရီထိုးပြီ။ ။
မီး ပထမဆုံး အကြိမ် မြန်မာစာအတန်းကိုပြေးတာပေါ့၊ မနေ့ကလဲစာမှမကျက်ခဲ့တာ။
၁၀ နာရီထိုးပြီ။ ။
သင်္ချာချိန်လေ သင်လေချာလေ ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘဲ ဘယ်တုံးကမှ မ မှန်ခဲ့ဘူး
အလီမှ မရ ရင်လူလုပ်လို့မရတော့ဘူးလား?
၁၁ နာရီရှိပြီ။ ။
ဇီဝဗေဒ ကလဲဘာဖြစ်လို့ ဖားကိုမှ ခွဲခိုင်းရတာလဲမသိဘူး?
ဗိုက်ဝနေရင် မီး ကမှမအိပ်တတ်တာ။
နှစ်နာရီ ကျရင် အနုပညာ ချိန်လေ မီးက တူရိယာတွေ တီးမှုတ်တာထက်
အားကစားချိန်တဲ့ တကယ့်ကိုပဲကောင်လေးတွေနဲ့ ဆော့ရတာကိုစိတ်ပျက်မိပါတယ်
မီးက သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာပဲ အေးအေးလူလူ အိပ်မက်မက်နေချင်တာ။
ဒီနေ့မှပဲ အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ကောင်းလိုက်တာ။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်တိုင်း စကပ်ကိုရေတွေစိုတာ အမုန်းဆုံးပဲ။ ရွံစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတာ။
ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ အိမ်ကိုပြန်ရတော့မယ်။ ဘယ်သူကမှလဲ
ဒီတနေ့စာ စာတွေမသင်လိုက်ရလို့ စိတ်ပူမယ်မထင်ပါဘူး။
မီးကစာတော့နဲနဲ ညံ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီးမှာ စိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်လေ။
ဒါပေမယ့် ဆရာမကတော့ လိမ္မာတဲ့ကလေးဆိုတာ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ရှိ ယုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူးတဲ့။
ဖွားဖွားရေ မီးတကယ်ကို ၀မ်းနည်းတယ်သိလား။ ။
Posted by တီချမ်း at 12:41 AM2comments: Links to this post
ဒီနေ့ မနက်စောစော အိမ်နောက်ဘေး လမ်းကြားလေးထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေတုံးက
လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်လေးတစ်ခုထဲ မတော်တဆ မျက်စိလည်ပြီး ရောက်သွားတယ်ဟ
အဲဒီမှာ လူစကားပြောတတ်တဲ့ ခိုဖြူလေးတစ်ကောင် နဲ့ တွေ့တယ်
သူက ပြောတယ် …..
နွေဦးရဲ့ ဥယျာဉ်က အရမ်းသာယာ လှပ ပြီးတော့….
နွေ ရာသီရဲ့ ဥယျာဉ် ကျတော့ အရမ်းစည်ကား သိုက်မြိုက်တယ်တဲ့၊
ဆောင်းဦးရဲ့ ဥယျာဉ် ကျတော့ အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းပြီးတော့……….
ဆောင်း ဥတု ရဲ့ ဥယျာဉ် ကျပြန်တော့ အရမ်းဆိတ်ငြိမ် ပါသတဲ့။
ဒီနေ့ရဲ့ ငါကတော့ အရမ်းကိုလှနေတာ ပေါ့ဟာ…
ဥယျာဉ် သေးသေးလေးရဲ့ အငွေ့အသက် က
လူ့စိတ်ကို တကယ် ကြည်ရွှင်စေတာပဲဟ ပန်းတွေကလဲ သိပ်မွှေး သိပ်လှ
ခိုဖြူလေး က ဥယျာဉ် လေးထဲမှာ အားရ၀မ်းသာ လျှောက်ပြီးတော့ ငါ့ ကို
ထူးထွေဆန်းလာ ပန်းပန်းချုံချုံတွေ ပြပေး၊မိတ်ဆက် ပေးနေတာပေါ့ဟာ
ဒါပေမယ့် ငါကတော့နင့် ကိုပဲသတိတွေရနေတာပါ၊ နင်ကအမြဲတမ်း
ကိုယ်ပိုင် ဥယျာဉ် လေး တစ်ခု လိုချင်ခဲ့တာမဟုတ်လား?
အဲဒီ အခိုက်အတန့်လေးမှာ နင့်ကိုအဲဒီ ဥယျာဉ် လေးထဲမှာ၊
ဥယျာဉ် လေးကနေပြန်ဖို့ ခိုဖြူလေးကိုနှုတ်ဆက်တော့ သူက
ငါလည်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ နောက်တခါကျရင်တော့ သူငယ်ချင်းပါခေါ်လာမယ်နော် ဆိုတော့
သူက တကူ ကူ့ ကူးနဲ့ ကောင်းတာပေါ့တဲ့
ကဲ နင်ကရော လိုက်ချင်ရဲ့လားဟင်?
၅ လပိုင်း၊ ၁၀ ရက်နေ့။ ။
အဲ နောက်တစ် ခါသွား ရင် ဥယျာဉ် လေး ကိုပြန်တွေ့ပါ့မယ်လို့တော့
အာမ မခံ နိုင်ဘူးနော်။
Posted by တီချမ်း at 12:39 AM No comments: Links to this post
ချစ်ရတဲ့ ကလိုကလူ လေးရေ
မနေ့က ငါပြတင်းပေါက်အပြင်ကိုထွက်ပြီး၊့ ၁၇ ထပ်အမြင့်
တစ်ပုဒ်ပြီးတော့ နောက် တစ်ပုဒ်……ပျော်လိုက်တာဟာ
ဒါပေမယ့် ငါအိမ်ထဲပြန်ဝင်လိုက်တာနဲ့ ပိုပြီးထူထပ်သိပ်သည်း တဲ့
အဲဒီတော့ တခါပြတင်းပြင်ကိုထပ်ထွက်ပြီးတော့ မှုန်တုန်တုန်ကြယ်တွေ ကိုကြည့်ပြီး
သီချင်းတွေ ထပ် တခါအော်ဆိုတာပေါ့ဟာ
ဆိုရင်းနဲ့ အာခေါင်တွေ ခြောက်ကပ်လို့ လျှာတောင် ကွဲတော့မယ် မရပ်ချင်သေးဘူးလေ
မြို့တော်ကြီးရဲ့ မီးရောင်တွေကိုတခါငေးမိပြန်တယ် စိတ်ထဲမှာနဲနဲ နွေးလာသလိုပဲလေ
မြို့တော်ကြီးထဲမှာတော့ ‘‘အထီးကျန်သူ’’ ဟာ ငါတစ်ယောက်ထဲ ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်
အနည်းဆုံး ငါ့လို အထီးကျန်နေတဲ့ ငကြောင်နောက်တစ်ကောင်တော့ ရှိရမယ်
ဟောင်းလောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခါ ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ သီချင်းတွေအော်ဆို..
အင်း ဒီ မြို့တော် ကြီးထဲ မှာ သူ နဲ့ ငါဘယ်တော့မှ ဆုံမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် သူ့ကိုငါ ရင်းနှီးနေသလိုခံစားရတယ်
၄ လပိုင်း ၁၇ ရက်နေ့။ ။
Posted by တီချမ်း at 12:36 AM No comments: Links to this post
ခဏနေရင် ငါတို့ ပျော်ပွဲစားထွက်ကြမလား? ဒါမှမဟုတ်ရေသွားကူးကြမလား?
မေမေက ပန်းပွင့်ချပ်တွေနဲ့ မတည့်တာရှိတယ်လေ
ဟိုးအမြင့်ကြီးမှာရှိတဲ့ ပန်းကလေးတွေကိုခူးဖို့ ဆင်ကလေး တို့ကိုလာကူတဲ့အခါ
သူ့ကိုပန်းသီးတစ်လုံးကျွေးရမယ် ၊ ဒါမှ မဟုတ်နှစ်လုံးပေါ့
အထဲမှာ အသည်းပုံ ချောကလက်ကလေး သုံးတုံးပါတယ်လေ
ဟာဟ… ငါတစ်လုပ်ထဲနဲ့ အကုန်စားပစ်လိုက်တာပေ့ါ…ဘယ်ရမလဲ
ငါ့မှာ ပိုးကိုက်နေတဲ့ သွားလေးချောင်းရှိတယ်ဟ ၊
ဒါပေမယ့် ငါနေ့တိုင်းသွားတိုက်ပါတယ် ၊ ရေလဲနေ့တိုင်းမှန်မှန်ချိုးတာပဲ
ညညဆိုရင် မိုးမချုပ်ခင်အိမ် ပြန်ရမယ် ၊ မဟုတ်ရင်မေမေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်လေ
ပန်းကလေးတွေလိုပဲ ကြယ်ကလေးတွေ ကရောနေ့တိုင်းကြွေကျတတ်လားဟင်?
ဒါမှမဟုတ် တဖြေးဖြေး ညှိုးသွားတာလား?
မနက်ဖြန် ငါတို့ ဘာလုပ်ကြအုံးမလဲ၊ ငါတော့မတွေးတတ်သေးဘူး
ကဲပါလေ၊ ငါတို့ဆုံနေကြနေရာမှပဲ အရင်ဆုံကြတာပေါ့…နော့်။ ။
၇ လပိုင်း၊ ၁၅ ရက်နေ့။
Posted by တီချမ်း at 12:33 AM2comments: Links to this post
ချစ်ရတဲ့ ‘မ’ ရေ…….
ခေါင်းလေးတောင်စောင်းငှဲ့မကြည့်ပဲ အားတင်းပြီး ‘မ’ ထွက်သွားတုံးက
အားလုံးတော့ အဆုံးသတ်ရတော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိထားခဲ့ပါတယ်
အခုဒီစာ ကိုရေးနေတဲ့ အချိန်ထိ ‘မ’ ကို ကျွန်တော် ချစ်နေသေးပေမယ့်
‘မ’ ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကိုငှဲ့ညှာ ရမယ်လေ မဟုတ်ဘူးလား?
သနားစရာကောင်းတာက ‘မ’ ချန်ထားခဲ့တဲ့ ‘ဘရောင်နီ’ ကြီးလေ
သူကတော့ ‘မ’ ရဲ့နှုတ်မဆက်တဲ့ ထွက်ခွာ ချန်ရစ်မှု ကို …... ဘယ်တော့မှနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး
သူက အခုထိ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ‘မ’ ပြန်အလာကိုစောင့်နေတုံးပဲလေ
တခါတခါ ကောင်းကင်ကြီး ကိုမော့ကြည့် ပြီးတော့ အသိမဲ့ သလို အူတတ်သေးတယ်
ကြည့်ရတာ ‘မ’ များပြန်လာမလားလို့ ခေါ်နေ သလိုပါပဲ
ကျွန်တော် တို့ကြားက နားမလည်မှုတွေ၊ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊
ကျွန်တော့် ရဲ့ အနေအထိုင်ပေါ့ဆမှုတွေ၊ ‘မ’ ရဲ့ သံသယတွေကို
ခွေးတစ်ကောင် နားလည်အောင် ကျွန်တော် ဘယ်လို ရှင်းပြ ရ ပါ့မလဲနော်
သူ့ရဲ့ အူလည်လည် ပုံစံ နဲ့ အပြစ်မဲ့ တဲ့ မျက်လုံး ၀ိုင်းဝိုင်းတွေ ကိုတွေ့ ရတိုင်း
‘မ’ ကဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်
ရက်စက်လွန်းပါတယ်၊ ရက်စက်လွန်းပါတယ်လေ။ ။
၈ လပိုင်း၊ ၃၁ ရက်နေ့။ ။
Posted by တီချမ်း at 12:32 AM No comments: Links to this post
‘‘E L ကိုလွမ်းတဲ့ည’’
to E L ( Nမျိုးအောင် သို့ )
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
N မျိုးအောင် နဲ့ အောင်မျိုး H
အိမ်အမှတ် (၁၄) နဲ့ (၄၁)
မင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ English နာမည်ကလဲအသံထွက်တူတယ်
Leo နဲ့ Scorpio ပေါ့
နောက်ကိုဘယ်တော့မှ ထပ်မတွေ့ရတော့မှာ မို့လို့
မင်းမျက်ခမ်းစပ်က ဒဏ်ရာ က
ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
'' if you are headed in the "wrong" direction,
GOD allows U-turn" တဲ့
လူဆိုတာ အပြစ်ကျုးလွန်ခြင်း မှာ
‘‘ ဂ’’ ကွေ့မရှိတဲ့ အမှားတွေပါ....
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
အဲဒါကိုယ် ခဏ ခိုးယူသွားလို့ပဲ
ကောင်းကင် မှာ လမင်းနဲ့ကြယ်ကလေးတွေကို
အဲဒါ ကိုယ် ဆော့ရတာ ရိုးသွားလို့
Written time not remember
Edited at 12:21 am
Posted by တီချမ်း at 12:22 AM No comments: Links to this post
‘‘အကြည့်’’ တွေနဲ့ လူထုရဲ့အမြင်တွေရယ်
လိင်တူဆက်ဆံမှု နဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့လိင်မှုဘ၀တွေရယ်
လိင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အနီရောင်မီးပြထားတဲ့ ဧရိယာတွေရယ်
စတားဘတ်စ်ကကော်ဖီနဲ့ အဖော်အချွတ် ကခန်းတွေရယ်
ငါ့ကိုခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် လွပ်လပ်ခွင့်ပေးကြပါ။ ။
Posted by တီချမ်း at 12:11 AM No comments: Links to this post
Grey sky above me
My mind and thoughts are floating through
Is thatafish swimming in front of me
I jump out off the watery clouds
There isacut in the sky
What if I go through there?
What will behind it?
Or so called heaven (if it is exiting)
Sometime I want to believe
But for being unbeliever
I am just as content
Did I really hearing or just my illusions
I am confuse now
Every thing is blurring to me
I wish I go deaf
I wish I’m dead!
5th Jan 2009,
Posted by တီချမ်း at 12:08 AM No comments: Links to this post
၀ိုးတ၀ါး အတ္တဆန်တဲ့ အချစ်
‘‘ကိုယ့်ကို ဘယ်လို ‘‘ချစ်’’ ရမလဲဆိုတာ…..
ဟိုးတုံးကဆိုရင် မင်းပျော်ရွှင်ဖို့၊ လိုတရဖို့
အမြဲကြည့်ရှူဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ‘‘ကိုယ့်’’ ကို
ဒီလိုနဲ့ပဲ ‘‘ကိုယ်’’ ဟာ
ဟိုးအရင်တုံးက ‘‘ကိုယ့် ပုံရိပ်’’ တွေအတိုင်း
‘‘ကိုယ့်ရဲ့’’ တုံးအမှု၊အထီးကျန်မှု၊စွန့်ပစ် ပစ်ပယ်ခံရမှုတွေနဲ့
ကိုယ့်ကို ‘‘၀မ်းနည်းမှု’’တွေနဲ့ ချန်ရစ်ခွဲခွာ…
အခုတော့‘‘ကိုယ်’’ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြီးချစ်တတ်အောင်
အချိန်တွေ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ ရှိဖို့
(မာနတွေ၊ သိက္ခာတွေ၊ အရှူံးတွေနဲ့အတူ)
For someone, once in my life
Written Date….. Not remember
Edited at 11:48pm
Posted by တီချမ်း at 11:46 PM 1 comment: Links to this post
အိမ်ရှေ့ မင်း ထန်းတော
သောက်ကြဖို့ တဲ့မြူတွေပြင်
တို့ တောရွာတောင်ဓလေ့ မှာမို့ 
ကြောင်၊ ချိုး ရယ်၊ လယ်မြေ ၊ ကြွက်တွေနဲ့ 
၀ိုင်းဖွဲ့ ကာ ထိုင်ကြ တာပ
လှဲ့ လိုက်ပါ သူငယ်ချင်းရဲ့ ခွက်ကို
အရက်ချို ရင်ကို မြတာမို့ 
အပူမြေ အိမ်ရှေ့ မင်းမှာလ
Edited at 11:31 pm
Wrote during the trip to Mandalay
Posted by တီချမ်း at 11:29 PM3comments: Links to this post
နင် နဲ့ ငါ၊ တို့ နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီးတော့ ‘‘ ဒါ ’’
Me and you, and we DULL
Dull, who came fromavery far
Blur is the color she wears
swearing the world is not fair
Dull, who arrived to the place call နာ
seeing the people who are ARR အာ
making my world to be blah blah blah...
သူလဲကိုယ့်လို ကဗျာရူး စာရူးပါပဲ
(ဒါ) ရောက်လာခဲ့တဲ့ မြို့က (နာ)
တွေ့နေရတဲ့ လူတွေက (အာ)
ငါ့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးက အခုတော့ (ပလာ ပလာ ပလာ)
စေတနာကို လူစားထိုးလို့ . . .အမှားတွေ တိမ်းစောင်းခဲ့ (အခါခါ)
အယူတွေ မိန်းမူးလို့ . . .တရှူရှူထွက်ရတဲ့ ဒေါသ (မသာမယာ)
ပိန်တလှည့် လိန်တလှည့် ကံကြမ္မာမှာ
နင်မသာ ငါမကျော်လို့ သေစမ်းဟဲ့ (မကြာမကြာ)
(ဒါ) အိမ်ကထွက်လာတော့ အမေက (မှာ)
ငါ့ရဲ့ ကြမ္မာကအခုတလောသိပ်တော့ (မမာ)
(ဒါ) နင် ကနင်ဖြစ်ပြီးတော့ ငါ ကငါ ဖြစ်နေတဲ့ (ကမ္ဘာမှာ)
ထမ်းထားတဲ့ဝန်တွေကြောင့် ပခုံးတွေက (နာတာ)
သီချင်း တစ်ပုဒ်လောက်တော့ ဆိုပါရစေ
လှမ်းလိုက်စမ်း ငါ့ရဲ့ (ဘာဂျာ)
(ဒါ) နင်မရှိတော့တဲ့ဘ၀ က (ဟာတာ)
သင်္ချိုင်းမှာချလိုက်တော့ ငါ့ (အတ္တခန္ဓာ)
အဆုံးသတ်လိုက်တော့ ဘ၀က (မာယာ)
မကြာပါ ငါ့ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ် (ဒကာ)
သေမှာကို ကုသိုလ်နဲ့ဖုံး (နာနာ)
ကံမကုန်ခင် ပြန်ဆုံရပါစေရဲ့ ချစ်တဲ့ (ငါ)
BS and A Chen
Posted by တီချမ်း at 11:19 PM4comments: Links to this post
Labels: အတွဲ ကဗျာများ
လွမ်းစာ အမှတ် ( ၂ )
အိမ်ထဲမှာ ထိုင်ကာ မင်းကိုပါ့
ရွှေ မြို့တော်ပေါ် နေ၀င်သွားချိန်တိုင်း
ဆိုးလိုက်တဲ့ အရေး။ ။
6:30 pm, 31st Jan 2009
On the way back to Bangkok from Ayuttaya
Posted by တီချမ်း at 11:17 PM No comments: Links to this post
နွမ်းလှပေါ့ မေ။ ။
မေ့အကြိုက် ပန်ဆင်ဖို့ ခရေကုံး
သီဖို့အပင် မောင်တို့အိမ် ကသင်းဘေးမှာ
သင့်ပြီချိန် ၀င်ရင်ပေါ့ ဒီဆောင်း
Posted by တီချမ်း at 11:12 PM2comments: Links to this post
နင် နဲ့ ငါ၊ တို့ နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီးတော့ ‘‘ ဒါ ’’...